Umshini wokugcwalisa nge-E-liquid Bottle Machine - Micvd.com
Ufuna imishini yokugcwalisa i-e-liquid ethembekile yomugqa wakho wokukhiqiza? Lapha NPACK, uzothola izinhlobo ezahlukene ze-e-liquid fillers eziklanyelwe futhi zakhiwa ukufeza izidingo zanoma yiluphi uhlobo lohlelo lokugcwalisa. Ungahlola ukukhetha kwethu okuphelele kwemishini yokugcwalisa i-e-liquid lapha futhi uthole umshini ofanele wohlelo lwakho lokusebenza. Xhumana nathi ngesilinganiso samahhala namuhla futhi sizoqinisekisa ukuthi uthola okudingayo ukuze uqedele amasistimu akho.
Uma udinga imishini ephezulu kakhulu yezinhlelo zakho zokufakelwa ze-e-liquid, siphethe kakhulu imishini yokugcwalisa i-e-liquid, nemikhiqizo ehlukahlukene yama-e-liquids, kufaka phakathi abahlanza, abasebenza ngamakhafula, nabasebenza ngamalebula. Siphatha nezingxenye zokubuyiselwa kwemishini ezingakusiza ugcine imigqa yakho yokukhiqiza. Ngeke uthole imishini yokufaka ye-e-liquid engcono kwenye indawo emakethe.
Izinhlobo Zemishini Yokugcwalisa E-Liquid Esiyithwalayo
Siphatha izinto ezahlukahlukene zokugcwalisa i-e-liquid ukufeza izidingo zakho zokukhiqiza, kufaka phakathi:
Umshini wokugcwalisa ongu-510
Ithuluzi Lokugcwalisa Amavolumu ahlukahlukene
Umshini Wokugcwalisa Ozenzakalelayo
I-E-Liquid Filling Syringe
Akunandaba ukuthi hlobo luni lwamadivayisi owadingayo wohlelo lwakho lokusebenza, uzolithola lapha NPACK, kanye neminye imishini eminingi ye-e-liquids neminye imikhiqizo ewuketshezi cishe kunoma yikuphi ukubonwa nokuhambisana.
Ezinye izinto Ezisetshenziselwa Ukupakishwa Kwama-E-Liquid Packaging Systems
Ngokungeziwe ekukhetheni kwethu ama-liquid fillers, uzothola konke okudingayo ukuze uqedele izinhlelo zakho. Siphatha abahlanza ukuqinisekisa ukuthi ama-cartridge we-liquid ahlanzekile ngaphambi kokugcwaliswa. Ungathola futhi ama-cappers ngokulungiswa ngokwezifiso kwama-cartridge we-e-liquid, kanye nabashayeli bokuphrinta ukubhala amalebula ngezinto ezahlukahlukene nangezithombe ezenziwe ngokwezifiso nangombhalo. Abahambisi bezingqungquthela bayatholakala nangamacebo okwenziwe ngezifiso.
Kungani Kufanele Usebenzise Ama-E-Juice Bottling wethu Wemishini?
Kwenzekani NPACK izihlungi ze-e-liquid ezihlukile kweminye imishini yezinye izinhlobo ukuvumelana kwekhwalithi. Siyaqiniseka ukuthi yonke imikhiqizo esiyiphathayo yakhiwe ngezinto ezinhle kakhulu ezitholakalayo zokwandisa ukuthembeka kuwo wonke umugqa wethu womkhiqizo. Ukukusiza ugcine imishini yakho yokugcwalisa i-e-liquid, sibuye sinikeze izinsizakalo eziningi njengokufaka, ukugqamisa ukusebenza komugqa, ukuhlanganiswa komugqa, kanye nenjineli yokubuyisela emuva emuva.
Mane nje ucele isilinganiso samahhala kithi futhi sizokusiza ekutholeni umkhiqizo ofanele wokwenza kahle ukusebenza kahle nokusebenza kahle kwezindleko.
I-automatic E-liquid Filling Machineis esebenza embonini yezemithi ebhodleleni le-2-30 ml lokugcwaliswa koketshezi kanye nokufaka uphawu lokupakisha, ukugcwaliswa kwepompon ngokuqondile (noma i-peristaltic pump) ukugcwalisa, ukulinganisa ukulungiswa okuqondile, okuvumayo, okulula, ukusebenza okulula, alikho ibhodlela akukho ukugcwaliswa, akukho bhodlela akukho ipulaki, hhayi umsebenzi wokumboza we plug.
Amabhodlela / iminithi angama-30 - 40
Cindezela ama-nozzles we-capping
I-99% noma ngaphezulu (kuye ngokuthi izici ze-plug zilungiswa kanjani)
Ngaphezu kwe-10 mm
I-380 V 50 Hz